Eyona nkampani i-Assay yeFlex
I-Fluex yomlilo isetyenziswa kwi-geochemical laboratoratoratries yokufunyanwa kwegolide kwiisampulu ze-Ore.lling xing xings kunye nomthengisi we-Chining Teing Teing Teing Teing Tais, igolide yasimahla kunye ne-gushar. Inkqubo yethu esemgangathweni iqinisekisa amanqanaba egolide kwi-biby ye-assox yomlilo ingaphantsi kwe-1-1.5ppb kwicandelo le-lisharge, elenza ukuba lilungele umsebenzi ophantsi kakhulu.
I-Assay Assay ye-Assax isetyenziswa kwi-geochemical laboratoratoratries yokufunyanwa kwegolide kwiisampulu zeore. Inkqubo yethu esemgangathweni iqinisekisa amanqanaba egolide kwi-biby ye-assox yomlilo ingaphantsi kwe-1-1.5ppb kwicandelo le-lisharge, elenza ukuba lilungele umsebenzi ophantsi kakhulu.
Izinto ezingafunekiyo ziqinisekisiwe ukuba zisetyenziswe kuvavanyo lokuvavanya umlilo, ezona ziphambili zethayo okanye zikhokelele i-oxide kunye ne-sgs eqinisekisiweyo yegolide<I-1 ye-PPB nesilivere<I-1 i-PPM. Ukongeza kusetyenziswa i-borax enesidima, i-sodium carbonate, i-silicon oxide, i-fluorite, kunye nezinye izinto uku-odola umthengi ngamnye.
Kwibhendi nganye eyenzelwe umthengi onikiweyo, isampulu ye-counter ishiywe, egcinwe iinyanga ezintathu.
(HG / T3002 )7)
23.7 ± 2.4%
I-20 ± 2%
47.5 ± 4.7%
6.3 ± 0.63%
2.65 ± 0.25%
I-130 ± 6.1m / ton
I-130gram / ton
Umgangatho: Sidlulile i-IS0 9001: 2005. Imigangatho, izinzile, inokuthenjwa